China Fekitori Zvakananga 100ml Inoraswa Chinyorwa Munyu Uye Pepper Grinder vagadziri uye vanotengesa | Trimill
Chii chinoraswa chemanheru pepper grinder?
Mhiripiri miriwo inowanzo kuve yakakamurwa kuita maviri masitayera: echinyorwa mhiripiri zvigayo uye emagetsi mhiripiri zvigayo. Iwo echinyorwa mhiripiri zvigayo pamusika zvakakamurwa kuita zvinogadziriswa uye zvisiri-zvinogadziriswa zvinoshanda. Kubva pakuona kwezvinhu, ivo vakapatsanurwa kuita girazi, plastiki, uye simbi isina chinhu uye mhando dzematanda, nyika dzakasiyana dzine zvadzinofarira zvakasiyana zvezvinhu. Semuenzaniso, nyika dzekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia dzinofarira magirazi uye epurasitiki masitayera, nepo nyika dzekuEurope neAmerica dzichisarudza masitayera esimbi.
Iyo inogona kuchinjika manyorerwo mhiripiri grinder ine bhodhoro muviri, bhodhoro chivharo uye chigayo. Iyo yekukuya yakarongeka pakati pebhodhoro muviri uye chivharo. Iyo yekukuya ine sleeve uye chigadziko chakaiswa mune ruoko, rinokuya mhete, yekugaya musimboti, yepakati shaft, yekugadzirisa pfundo uye chigaro chekugadzirisa cheiyo yekugaya ruoko.
Nekugadzirisa pfundo, mukaha pakati pekugaya mhete nekukuya musimboti unogona kugadziridzwa, kuitira kugadzirisa kunaka kwepepuru. Inogona kugadziridzwa kusangana zvakasiyana zvidikanwi.
1. Makomendi akazara kusangana nezvinodiwa nevatengi zvemhando dzakasiyana uye zvimiro zvakasiyana. Iko kugona kunokwana kubva pa30ml-500ml, 80-180ml ndiyo inonyanya kufarirwa; zvakajairika maumbirwo akatenderera uye akaenzana.
2. Wide kukuya renji: dzakasiyana kukuya misoro inogona kukuya dzakasiyana zvidimbu, senge gungwa munyu, sesame, mhiripiri, nezvimwe.
3. Yakazara yekugadzirisa mabasa: Kune anogadzirisika uye asiri-anogadziriswa, pakati payo iyo anodzora mamodheru akapatsanurwa kuita knob mhando yekugadzirisa uye Push-dhonza mhando kugadzirisa.
4. Mhando dzakasiyana dzekugaya macores: Kune maviri marudzi ezvinyorwa zvekugaya macores: zvedongo kukuya macores uye epurasitiki kukuya cores. Vazhinji vedu tinoshandisa zvedongo kukuya cores, ayo akasimba uye nharaunda. Ceramic kukuya cores inogona kusarudzwa uye kugadzirwa zvinoenderana zvakasiyana zvinodiwa.
5. Simba dhizaini dhizaini: tinogamuchira OEM neODM zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, kushandura pfungwa dzevatengi kuva chokwadi.
Pashure: 2021 Runako dhizaini yemagetsi munyu uye pepper grinder yakaiswa
Zvadaro: Mugadziri Pepper Kukuya Kofi Grinder Ceramic Kukuya Core
Nhema mhiripiri Uye Munyu Grinder
Mhiripiri Uye Munyu Kukuya
Munyu Uye Pepper Grinder Wholesale